PCB-ga ugu Wanaagsan / Soosaarayaasha Gudida Wareega ee Daabacan | Farsamada ugu Fiican
Soo saaraha PCB-ga ugu fiican ee FPC, Rigid-flex, MCPCB, PCB Ceramic, iyo PCB.
PCb Copper culus
Sare Tg PCb
PCb khafiif ah oo dheeri ah
Bga PCb Golaha
Xargaha & Xargaha Xargaha
Alxanka ka dib
Golaha PCb ee hogaaminaya
Makaanikada iyo Golaha Bedelka Membrane
Guddi wareeg ah oo dabacsan
Fiilo fidsan (ffc)
Soosaarayaasha guddiga wareegyada daabacan ee mcpcb, ceramic pcb, pcb copper culus, fr4 pcb, pcb khafiif ah oo dheeri ah, pcb dabacsan iyo pcb dabacsanaan adag.
Tignoolajiyada ugu Fiican ee Daabacan Alaabta Wareegga Wareegga & Golaha PCB
Farsamada ugu Fiicansoo saarayaasha guddiga wareegga daabacan waa bixiyayaasha xal-joojintaPCB ugu fiican Adeegga looxa wareegyada daabacan ee dabacsan, PCB-ga biraha ah, PCB ceramic, fr4 PCB, iwm. Weydiinta soo dhawoow!
Ma garanaysaa waxa uu yahay PCB etching?
Etching waa farsamo lagu saaro walxaha iyadoo la isticmaalayo fal-celin kiimiko ah ama saameyn jireed. Farsamooyinka cuncunka waxaa loo qaybin karaa qaybo qoyan iyo qaybaha xoqidda qallalan.
Tiknoolajiyada Dusha sare leh
SMT waa tikniyoolajiyadda isku xirka dusha sare (teknoolojiyadda korka sare ee dusha sare) (soo gaabinta Teknolojiyadda Surface Mounted), taas oo ah tignoolajiyada ugu caansan iyo habka warshadaha elektiroonigga ah. Waa tignoolajiyada isku xirka wareegga instno pin ama qayb ka kooban dusha sare ee rasaasta rasaasta (SMC / SMD, qaybta Chine) ee dusha sare ee looxa wareegga daabacan (Printed Circuit Board, PCB) ama dusha sare ee substrate kale , oo lagu alxanayo alxanka soo noqnoqda ama alxanka immersion.
8-Lakabka 4OZ saxan culus oo naxaas ah
Waa maxay saxan naxaasta qaro weyn ee PCB? Saxanka naxaasta ah ee qaro weyni waxa uu soo bandhigayaa habka sugitaanka, iyada oo leh xad farsamo iyo dhibaato hawleed, kharashkuna sidoo kale waa qaali. Lakabka bireed naxaasta ah ayaa ku xidhan lakabka sare ee FR-4. Marka dhumucda naxaasta waa 2oz la dhammeeyo, waxaa lagu qeexaa sida saxan PCB naxaasta qaro weyn.PCB saxan naxaas qaro weyn ayaa leh waxqabadka fidinta aad u wanaagsan, oo aan xaddidnayn heerkulka processing, dhibic dubista sare waxaa loo isticmaali karaa marka ogsijiin afuufto, heerkulka hoose isbedelin. jeexan iyo hababka kale ee alxanka dubista kulul, iyo sidoo kale ka hortagga dabka, ku faafay alaabta aan guban, copper qaro weyn PCB dhumucdiisuna waa ka duwan yahay, munaasabadaha codsiga gaarka ah sidoo kale aad u kala duwan.
Afarta lakab ee 2 OZ naxaasta culus PCB waxay ka timaadaa tignoolajiyada ugu fiican Shiinaha
Xaqiijinta PCB, lakabka naxaasta ah ayaa ku xidhan dusha fr-4. Marka dhumucda naxaasta ≥ 2OZ la fuliyo, waxaa lagu qeexay saxan naxaas ah oo qaro weyn. Dhumucdiisu way kala duwan tahay, meesha dhabta ah ee la isticmaali karo sidoo kale aad bay u kala duwan tahay.
Guddiga PCB-ga 10-lakabka ah wuxuu ka yimid tignoolajiyada ugu fiican Shiinaha
Gudida wareegyada lakabka badan waxaa guud ahaan lagu qeexaa sida 10-lakab —— 20-lakab ama ka sareeya, taas oo ka dhib badan habaynta guddiga wareegyada multi-lakabka ah ee dhaqanka, tayada iyo kalsoonida shuruudaha waa sare, inta badan loo isticmaalo qalabka isgaarsiinta, sare. -dhamaadka server-yada, elektiroonigga caafimaadka, duulista, xakamaynta warshadaha, militariga iyo qaybaha kale.
Hal dhinac oo Dhumuc leh Filimka dhoobada PCB
Guddiga wareegga filimka qaro weyn, oo sidoo kale loo yaqaan guddiga wareegga isku-dhafka ah, ayaa lagu sameeyay daabacaadda shaashadda ee qalabka kala duwan. Substrate-ka inta badan waa 96% alumina alaabta dhoobada ah.
Soo saaraha xirfadlayaasha ah ee Shiinaha ee samaynta dhoobada filimada qaro weyn.Filimka qaro weyn ee PCB, Ceramic PCB
Filimka dhoobada ah ee laba-geesoodka ah ee PCB
Soo saaraha xirfadlayaasha ah ee Shiinaha ee samaynta dhoobada filimada qaro weyn.
Soo-saare PCB ugu Fiican oo leh Adeegyada Golaha
Thesoo saaraha PCB ugu fiican diiradda saarayaa xal hal-stop in looxa wareegga caadadii daabacan iyoPCB shirka.
Tan iyo bilowgii, sida soo saaraha guddiga wareegga daabacan ee ugu fiicanPCB shirka Adeegga Aasiya, Tiknoolajiyada ugu Fiican waxaa loo qoondeeyay inay noqoto lammaanahaaga ugu wanaagsan ee horusocodka, looxyada wareegyada daabacan ee saxda ah, sida looxyada naxaasta ah, PCB-ga khafiifka ah, lakabyo isku dhafan, TG sare, HDI, soo noqnoqoshada sare (Rogers, Taconic) , guddiga xakamaynta impedance, Metal Core PCB (MPCB) sida Aluminum PCB, Copper PCB, iyo Ceramic PCB (conductor Copper, AgPd, Au, iwm) iyo wixii la mid ah.
Oursoo saarayaasha guddiga wareegga daabacan ma bixiyaan kaliya PCB& Wax soo saarka MCPCB, laakiin sidoo kale ay ku jiraan nuqul ka mid ah PCB, injineernimada& naqshadeynta habka, maareynta qaybaha& xal-u-helidda, PCB-guriga-guriga& is dhexgalka nidaamka buuxa, iyo tignoolajiyada dusha sare ku dhejisan (SMT), ururinta alaabada oo buuxa& tijaabinaya.
Farsamada ugu Fiicansoosaarayaasha guddiga wareegyada daabacan oo leh khibrad ka badan 15 sano, had iyo jeer ku jawaab 12 saacadood gudahood, oo leh adeegga isku xirka PCB ee ugu fiican qiimo wanaagsan.
Tayada PCB waa udub dhexaadka alaabta. Dhammaan injineerada& Ragga waaxyaha muhiimka ah waxay leeyihiin waayo-aragnimo ka badan shan sano oo ku saabsan warshadaha PCB, waxaan la soconaa heerka PCB ee caadiga ah, iyo sidoo kale codsiga gaarka ah ee macaamiisha.
Inta badan injineeradayada iyo hawl-wadeenadayada waxay leeyihiin waayo-aragnimo toban sano ka badan oo ku saabsan warshadaha PCB, markaa waxaan soo saari karnaa khaas ah sida 20 OZ boodhka culus ee naxaasta ah, lakabka 4 MCPCB, iwm.
Waxaan soo iibsannay mashiino badan oo horumarsan, oo farshaxanimo heer qaran ah& qalabka wax soo saarka PCB, iyo hubinta, si loo hagaajiyo tayada looxyada our.
Waxaa nala sii wadey inaan horumarino MCPCB, FR4 PCB& FPC& Heerarka wax soo saarka PCB Ceramic si aad u hesho natiijooyin lagu qanco macaamiisha iyo nafteena.
Ku saabsan Tiknoolajiyada ugu Wanaagsan ee soo saarayaasha guddiga wareegyada daabacan
Dammaanad-qaadista Tayada Guddiga Wareega ee Daabacan ee Gaarka ah
Soo saaraha farsamada ugu wanaagsan ee PCB, oo la aasaasay Juun 28, 2006, waa shirkad ka diiwaan gashan Hong Kong oo diiradda saara bixiyaha xalalka hal-joojin ee FPC, PCB Rigid-flex, MCPCB, FR4 PCB, Ceramic PCB, PCB Special sida Copper culus ( ilaa 20 OZ), PCB dhuuban oo dheeri ah (0.10, 0.15mm), iyo adeega kulanka PCB.
Tan iyo bilawgeedii, iibiye guddiga wareegga daabacan (PCB) ee Aasiya, Tiknoolajiyada ugu Wanaagsan waxaa u heellan inay noqoto lamaanahaaga PCB ee ugu fiican ee horumarsan, looxyada daabacan ee saxda ah, sida looxyada naxaasta ah, PCB aadka u khafiifsan, isku dhafan lakabyada, TG sare, HDI, soo noqnoqoshada sare (Rogers, Taconic), guddiga xakamaynta impedance, Metal Core PCB (MPCCB) sida Aluminium PCB, Copper PCB, iyo Ceramic PCB (conductor Copper, AgPd, Au, iwm) iyo wixii la mid ah.
Waxaan bixinaa ma aha oo kaliya PCB& Wax soo saarka MCPCB laakiin sidoo kale ay ku jiraan nuqul ka mid ah PCB, injineernimada& naqshadeynta habka, maareynta qaybaha& xal-u-helidda, PCB-guriga-guriga& is dhexgalka nidaamka buuxa, tignoolajiyada dusha sare ku dhejisan (SMT), iyo isu-ururinta alaabada oo dhan& tijaabinaya.
Kiiska Guddiga Wareega ee Daabacan ee Gaarka ah
Julaay 11, waxa na soo booqday macaamiil cajiib ah oo ka socda Jarmalka
Julaay 11keedii, waxa aanu haysanay macaamiil aad u fiican oo ka socda Jarmalka ayaa saaka nagu soo booqday, dhab ahaantii Peter, maareeyahayaga guud iyo Tiffany, gabadhayada wax iibinta ayaa booqatay shirkaddiisa hal bil ka hor Frankfurt. Markan macmiilku waxa uu soo booqday xafiiskayaga, FPC, warshadda SMT oo uu nala qaatay qado macaan. Intaa waxa dheer, waxa uu na siiyay mashaariic badan oo ay ku jiraan Ceramic PCB.Waad ku mahadsan tahay taageeradiisa weyn, waxaana u heellan doonnaa inaan siino macaamiisheena alaab iyo adeegyo aad iyo aad ugu qanacsan.
Waxaan haysanay hal macmiil oo Maraykan ah oo na soo booqday Julaay 25, 2019
Waxaan haysanay hal macmiil oo Maraykan ah oo nagu soo booqday July 25, 2019. Wuxuu booqday warshadeena SMT iyo FPC wuxuuna ku faraxsan yahay inuu arko shaqaalaheena khibradda leh oo ku jira aqoon-is-weydaarsi cad, alaabooyin degdeg ah oo tayo leh oo tayo leh.
Caado ka yimid Australia ayaa mashruuciisa kala xaajooday Tignoolajiyada ugu Wanaagsan
Mid ka mid ah macaamiisheena cajiibka ah, ayaa soo booqday shirkadeena Abriil 3, 2019.Macaamiilku waxa uu sheegay in Tignoolajiyada ugu Wanaagsan loo mahad naqay in ay tahay soo-iibiyaha la qiimeeyay ee alaab tayo sare leh oo si sax ah u buuxiyay shuruudihii looga baahnaa.Wuxuu dul maray shuruudaha PCB ee looga baahan yahay baahiyahooda wax soo saar ee hadda jira wuxuuna na siiyay qiyaasaha badeecadaha looga baahan yahay mashaariicdan.
LAXIRIIR SOO SAARE PCB UGU FIICAN
Kaliya ku dhaaf iimaylkaaga ama lambarka taleefankaaga foomka xiriirka si aan kuugu soo dirno xigasho bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeena ballaaran!